Inyathelo lokuqala kukulebhelisha, inyathelo lesibini kukhutshelwa ngaphandle: iqhosha lokuthintela: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	10 Novemba 2019	• 23 Comments
'Ababoneleli bezempilo eNetherlands abanesifo somkhuhlane kufuneka banxibe iqhosha eliyichazayo. Yile nto ithethwa ngusihlalo uTed van Essen weDutch Influenza Foundation (NIS). Iya kubaqinisekisa kakhulu abaguli, utshilo. " Iingxelo zeRTL namhlanje. Ngaphantsi koluphi ulawulo sikhe sikubone ukunxiba kwamaqhosha ngaphambili? Uyakhumbula? Ezo yayizizinkanyezi kwaye ezo zinkwenkwezi zaziqinisekisa ukuba wonke umntu uyazi ukuba ngubani makahlalele kude ukuze angabi lixhoba lokuhlaselwa. Ngoku loo nxalenye yeembali sele yenziwe yintsomi kwaye ke ngoku siyayazi ukuba inkokeli yolo rhulumente yayixhaswe liqela elisesemandleni nanamhlanje. Akukho ngaphandle kwesizathu ukuba uninzi lweenkokheli zamaNazi zingafumana uhambo olukhululekileyo lwe-KLM oluqhutywa nguNkosazana Bernhard ukuya eArgentina kwaye kwakungekho sizathu sokuba uchwepheshe werokethi kaHitler uWerner von Braun waqeshwa njengomlawuli weNASA.
Uluhlu lwabakhweli ukusuka ngelo xesha alugcinwanga, kwaye ayothusi, ihambile, kwaye ubungqina ke abukho okanye ubuncinci kunzima ukubonelela, kodwa kugcino olugcinwe eArgentina kubonakala kabuhlungu ukuba kusekho uluhlu lwabakhweli apho apho kungenakufundwa khona ukuba amanqaku aphikisayo asuka eJamani yamaNazi athuthwa yi-KLM esuka eZurich ayiswa eBuenos Aires. Amagama anjengoBernard Helfrich, umyili wezakhiwo ukusuka ngexesha lamaNazi, oya kusebenzela uPeron kwaye wayengamkelekile apho. UHelfrich ushiya i-25 ngoJulayi 1947 ngenqwelomoya ehamba nge-KLM esuka eZurich (enegama lePrince Bernard) ukuya e-Uruguay kwaye ukusuka apho ngesikhephe ukuya eArgentina. UJuan Peron wayengumongameli waseArgentina ukusukela kwi1946. Akaze ayifihle imfesane yakhe kuHitler kunye neJamani yamaNazi. EArgentina kuye kwenzeka ukuba amajoni aseArgentina eynxibe iyunifom yaseJamani ahamba ezitratweni, nasemva kwemfazwe abaphuli-mthetho baseNazi bamkelekile eArgentina. Banokubasebenzisa kakuhle ngolwazi lwabo lobuchwephesha, ngokuqinisekileyo kwilizwe apho ukukhula koqoqosho kwaqala khona, kwaye imali yabo ingaphezulu nje kokwamkeleka.
INetherlands yenza ushishino oluhle neArgentina, umzekelo, ishishini kaloliwe. Inkosana uBernhard ke yayingumhlobo wobuqu kaPeron. Kwakungekho sizathu sokuba iPrince Bernhard yayingumsunguli weqela le-jpgberg kwaye kwakungekho sizathu sokuba iqela licace gca linye ngamabhongo afanayo naka-Adolf Hitler, lowo wobukumkani obukhulu baseYurophu. Amagama anjengoKlaus Barbie, Adolf Eichman, Jozef Mengele, kodwa ngokunjalo nezithixo ezincinci ezinje ngoHorst Deckert, uRüdiger Schultz zamkelekile eArgentina; Ilizwe lomhlobo kaBernhard. Ezi zimbini zokugqibela zikwabonakala kuluhlu lwabakhweli be-KLM abafunyanwa eArgentina. Urhulumente waseMelika welo xesha wayenokuthi ucele i-KLM ukuba ijonge ngokufanelekileyo abagibeli babo, kuba babeneempawu eziqinisekileyo zokuba iimbaleki zamaNazi zazihamba noKLM kwiindawo ezikhuselekileyo ngokuhamba kwe-arhente yokuhamba esekwe eSwitzerland ekhokelwa ligosa elidala le-SS. Makhe siqwalasele nje ukuba u-sham omnandi ukufihla inyani yokuba onke amaNazi angaphezulu nje kwamkelekile. Ukunyuka nokuwa kuka-Adolf Hitler kwakhonza i-ajenda kuphela kwaye yayicwangciswe kakuhle kwangaphambili. Eyona njongo yayikukufaka igalelo kubunzima bamatyala, njengesiphumo sokucinezela kwenani labemi be-6 yezigidi, bafumana imeko yokungakwazi ukuhamba kunye nelizwe labo (kunye neebhiliyoni zenkxaso).
Ngubani owenza umgudu omncinci ukuze Ngaphandle kwesakhelo sembali esemthethweni ukumba, unokufumanisa ukuba eyona nyaniso sakha sayiva kumlomo kaWinston Churchill yayikule ngxelo ilandelayo: Imbali ibhalwe ngophumeleleyo. ENetherlands oko kuthetha lukhulu kangangokuba sicinga ukuba kukhulu ukuba inkosana yethu yayisebenzela u-IG Farben (inkampani yelogesi idume kakubi) nokuba umbuliso ubethwa wakhutshwa kumtshato kaJuliana noBernhard.
Indlu yeLippe, apho inkosana yamaDatshi uBernhard ingabalwa khona (eneneni njengebalo, kodwa ngenxa yesisa esivela kumalume wakhe, Fürst Leopold van Lippe, wase1916 njengenkosana) wajoyina iqela lamaNazi. Kumsebenzi wakhe oqhelekileyo I-Royals kunye neReich, iinkosana zaseHessen kwiJamani yamaNazi (2006) UJonathan Petropulous usemba amaNazi angaphantsi kwamashumi amabini phantsi kweLippes (kwaye ke uyalibala ukongeza inkosana yethu uBernhard kuyo ukwenzela lula). Ngale nto, esi sini, sahlulwe ngaphezulu kwemigca eyahlukeneyo, sinokubizwa ngokukhuselekileyo njengomboneleli ophambili weSizwe soLuntu. Ngokubetha kwangoko, kwi-1928, wayejoyina i-NSDAP kunye nomza ka-Bernhard umzala u-Ernst zur Lippe, owayemiselwe ukunyukela kwitrone ka-Lippe. Wayengowe-Erbprinz wokuqala osemthethweni kwizikhundla zamaNazi.
Oku kulapha ngentla kufanelekile kwimeko yesihloko seli nqaku, nangona ungakufumana kungeniswa imbali engalindelekanga. Ndizama ukuyenza icace kumfundi ukuba umhlaba uqhutywa liqela elinegazi elizimeleyo nelithi ngamanye amaxesha lizenzele owalo utshaba njenge-alibi ukuze ekugqibeleni likwazi ukungenelela ngamandla kwaye lifezekise iinjongo zexesha elide (jonga incwadi yam entsha). Kule meko, kuyimfuneko ukubona ukuba iMfazwe yeHlabathi yokuQala yayisetyenziselwa ukwaphula uBukhosi base-Ottoman kunye nokugcina umhlaba wase-Palestina kwilizwe lase-Israel. Oku kubekwe phantsi kwisibhengezo seBalfour kunye nesivumelwano seSykes-Picot (bona apha ingcaciso). Imfazwe yesibini yeHlabathi emva koko yanceda ukungathinteli ukusekwa ngokukhawuleza kwelizwe lakwa-Israyeli, kuba umhlaba wonke ngoku wawunoxolo ngeqela elatshutshiswayo. Kwi-1948, ukudalwa kwelizwe lakwa-Israyeli kwakuyinyani. Ukusukela ngoko, amandla e-Israel kunye nefuthe lenyuke kakhulu kwaye siyakwazi ukubona ukuba i-US yeyona inkulu yemali kunye nomxhasi ku-Israeli ngaphandle kwe-Palestina. Ungathi u-Adolf Hitler wancedwa emngcungcuthekiswa yintsimi enye eyamnxibisa endaweni yakhe yamandla ukuba atshintshe uburhalarhume ocacileyo ngenguquko yentando yesininzi.
Akufanele ke ngoko ukuba kumangalise ukuba, ngokutsho kwababhali-mbali abaninzi, uAdolf Hitler wachitha ubomi bakhe eArgentina de kwasekufeni kwakhe
Kwi-1954 ukusekwa kweqela elifihlakeleyo le-jpg le-Socialist (kunye ne-freemason) UJoseph Retinger kunye nePrince Bernhard kwenzeka. Ibhunga eliphambili lalibandakanya uRobert Ellsworth (Lazard Freres = Rothschild), John Loudon (NM Rothschild) Paul Nitze (Schroeder Bank), CL Sulzberger (New York Times), Stansfield Turner (kamva waba ngumphathi weCIA), uPeter Calvocoressi, UDaniel Ellsberg, uAndrea Schoenberg (RIIA) noHenry Kissinger.
Ingqungquthela eyimfihlo yokuqala yebafundisi-ntsapho yenzeka ukusuka kwi-29 ukuya kwi-31 ngoMeyi 1954 kwihotele ye-jpg e-Oosterbeek, apho iqela lathiywa khona igama. Uyilo loLuntu lwaseYurophu, olunokubangelwa yi-European Union oluvela kwibhodi yokudweba yeli qela le-jpg. Kungabizwa ngokuba kunqabile ukuba umongameli wokuqala woLuntu lwaseYurophu wayeyinkokheli endala yamaNazi. UWalter Hallstein wayelilungu lombutho wabakhuseli bomthetho wamaNazi ", umbutho owaba yintsika esemthethweni yeYurophu phantsi kolawulo lwentsebenziswano yamaNazi / yenqanawa. U-Hallstein wayengunjingalwazi kwezomthetho kunye nezoqoqosho kwiYunivesithi yaseFrankfurt, apho ikomkhulu le-cartel yemichiza kunye nomphathi ophambili wezemali waseNazi u-IG Farben. WayenguMongameli weKhomishini yaseYurophu ukusuka kwi-1958 ukuya kwi-1967.
Kuyanceda ukubona ukuba zihamba njani iihres kwaye sisasebenza kwicandelo elinye lamandla, kodwa kwijakethi eyahlukileyo. Abo baxhasa uHitler kwimali edakumbileyo ngabo basesemandleni. Ijacket ye-showy fascism ithathelwe indawo yi-George Orwellian-jacket entsha-yokuthetha, apho yonke into ye-fascist ipakishwe ngothando. Iinkampu zoxinzelelo zibizwa ngokuba liziko lezempilo le-GGZ; iinkampu zokufunda ngokutsha zibizwa ngokuba kukukhathalela ulutsha; Uhlaselo lwanamhlanje lulungiswa ngoqeqesho lwabasebenzi be-psycholance kunye nokulungiselela umthetho osusa wonke umbundu wokukhupha abantu kumakhaya abo. Ngelixa ulawulo lukaHitler lwalusebenza ngokubonakalayo ngendlela ethandabuzekayo, ngoku ipakishwe kakuhle kwaye iyunifomu kunye nemipu ziye zathathelwa indawo ziinqwelwana zabongikazi be-GGZ kunye neenaliti zenaliti. Iilebheli ezicacileyo zolawulo lwamaNazi ngeNkwenkwezi kaDavide ekugqibeleni zaye zaneziphumo ezichaseneyo (kwaye mhlawumbi zenziwa ngasese) iziphumo:Nantoni na ekwenza ukuba ulixhoba, ubonelela ngemeko yokungavuleki kobumeMsgstr ". Cinga ngononophelo ngalo ngxelo.
Apho u-Adolf Hitler wayenesebe elibonakalayo lobuxoki elibonakalayo kwaye apho ulawulo lwalucacile mkhosi, intetho entsha ye-Orwellian yavela apho. Umkhosi wethu awukho kwindawo yemfazwe; Umkhosi wethu uphumeza uxolo. Ngokwenyani kuzo zonke iileya zoluntu sibona ifascism eyimfihlo kwijekethi emnandi yenza ukubonakala kwayo. Ukutsha kwencwadi yamaNazi kwakusavuliwe; Ukutshiswa kwencwadi kwanamhlanje kwenzeka kwi-Ofisi ye-Kasja Ollongren ngokusebenzisa ucoceko nokucoceka ngohlobo lwebhokisi. Oko kwakusele kubizwa ngokuba bubuxoki phantsi kweJamani yamaNazi ngoku ibizwa ngokuba yi-journalism. Uluvo lokuba intatheli yaseDatshi ngokwayo ivelisa iindaba ezinkulu ezingeyonyani sele ibanjiwe ngokuseta iisayithi ezichasayo kurhulumente, ukuze ukwazi ukwalatha umnwe kwelo qela uzenzele lona kwaye usete ubucukubhede, ukuze ngokukhawuleza uphelise ukugxeka okwenyani nokuzimela. . Konke kuqhubekele phambili ngakumbi kwaye kucocwe ngakumbi kunangaphambili, kodwa kuyacaca ukuba ibhloko yamandla encedise uHitler ekunyukeni kwakhe; Wayesazi nokuba uya kuphinda awe kwakhona emva kweminyaka embalwa, kwaye ke uqhubeke imigaqo efanayo ngendlela engcono. Ngaba ilungile okanye ingcinga egqithileyo? Hayi, ingumbono ococekileyo kuphela kwaye uqhagamshela amachaphaza kumzobo endaweni yokuhamba nokuqhwanyaza.
Ngeli xesha phantsi kweJamani yamaNazi ukubizwa ngokucacileyo kwamaqela ekugqibeleni kuye kwanefuthe lokungaphili emva kwemfazwe, ngoku sibona ukungafani kwelebheli lisetyenzisiwe. Yonke into ijikile, ngokutsho 'kwemigaqo yokuhlaziya' kaGeorge Orwell. Isindululo sikaTed van Essen weDatshi Influenza Foundation, apho ababoneleli kufuneka banxibe amaqhosha, basikhumbuza ngamandla ngolawulo lwe-'40 / '45. Apho, nangona kunjalo, iilebheli zazisetyenziselwa ukulebhelisha iqela "elalifanele ukucocwa". Ngoku ilebheli isetyenziselwa ukulebhelisha iqela "elikhuselekileyo ukuphatha". Ke ngokwenyani sibona ifom efihliweyo ye-fascism apha, kwakhona kwijekethi ebukeka emnandi. Kwaye umbandela wokugonywa wonyulwa ngokulula, kuba uninzi luya kuyiqonda imbono yokusasaza ukuba ilogonyo ilungile kuphela kwaye nabani na ohambahamba ngaphandle kogonyo yibhombu yexesha lokubetha. Singamangqina kwimibono ye-fascist esongelwe kwi-propaganda enobunkunkqele, sisoloko sisebenzisa imithombo yeendaba ukuzisa abantu inyathelo ngenyathelo kwimodi yokwamkela. Imithombo yeendaba yoluntu nayo idlala indima ebalulekileyo koku. Kwam incwadi entsha Ndicacisa ukuba kutheni singasayi kuthembela kwingxoxo yemidiya yoluntu.
Ukuphikiswa kwengcinga yeqhosha lokugonya kuya kujongwa ngabaninzi njengento ehlekisayo, kuba phantse bonke abantu ngoku bahlelwe ngombono wokuba ukuhambahamba ngaphandle kogonyo kuyingozi kakhulu. Kucace mhlophe ukuba umfanekiso wethu wokwenyani kule ndawo ukwaphuculwa ziingxoxo kunomathotholo nakwiTV. Umbono wethu wehlabathi umiselwe ikakhulu ziindwendwe zetafile kaJeroben Pauw kunye noMatthijs van Nieuwkerk okanye iingcali eNieuwsuur. Ukugxekwa kuvela kwicala eliphikisayo eliphikisayo, oko kuthetha ukuba kuhlala kukho ibhombu kwindawo ephantsi phaya okanye ngokulula 'inyani' okanye 'iyelenqe' lokucekiswa libambekile. Iilebhile enkulu iqalile (jonga kwakhona le ndlela yokufakela iilebheli) kwaye ngoku iqengqelwe encinci ngesiphakamiso sale iqhosha. Ngokubhekisele kum, sinikela ubungqina befashoni yakudala kwibhantshi entsha. Ngokuchasene noko kwenzeka phantsi kweJamani yamaNazi, yonke into ngoku ipakishwe kwinto emnandi kakhulu neyimfuneko ye-Orwellian gown en iyenziwa kancinci kancinci.
Uluvo lokunxiba iqhosha luyinto ethe tye kwaye iyingozi. Iyaqinisekisa ukuba abantu abanoluvo malunga nogonyo banokwaliwa ecaleni kwebhedi kwaye ngenxa yoko abanakukwazi ukwenza umsebenzi wabo. Le yeyona ndlela iphantsi yokunyanzelisa izimvo. Ukunyanzela umzimba wengcinga yinkcazo ye-fascism.
Uludwe lwekhonkco lovimba: relay-of-life.org, trouw.nl
Ngaba i-regents yaseDutch ifumana umnqamlezo kunye noNazi?
Ukuchithwa okulawulwayo kwe-brand 'rechts', iTump, i-Brexit (kunye nayo yonke into edibene nayo) iqalile
tags: Afghanistani , iqhosha, germany, Essen, fascism, eziziimbalasane, ogonyo, Influenza, Kasja, nazi, AmaNazi, Dutch, Ollongren, isiseko, Ted, lokugonywa, van
10 Novemba 2019 kwi-15: 13
Zonke ezi iilebheli ezintsha zinika inkululeko, kodwa ngaba azikhe zidideke ngexesha elinye? Sibuza oku kumqeshwa we-COC uMargriet Oosterhuis. Ufanele ahleke. Uqinisekisa, "Ewe, iyadideka, ngoba kwelinye icala sifuna ukususa iibhokisi kwaye kwelinye kukho iilebhile ezininzi kunangaphambili."
Qaphela uMartin Vrijland: kwaye kweleyibheli ayifakwa ngokwahlukileyo kolu luhlu lutsha lweqela. Igama elithi "inkululeko" ngomnye umzekelo omangalisayo wentetho entsha kaGeorge Orwell. Ayinikezi inkululeko: inesiphumo esingangqalanga (sokuziva) sokungabandakanywa (esingengobakhe).
10 Novemba 2019 kwi-15: 28
I-1 yeelebheli kwinqaku leTrouw 'ipani'.
Jonga into emele iPan:
Funda incwadi yam ukuze ufumane inkcazo kwaye kutheni le nto kubalulekile ukuba uqaphele.
10 Novemba 2019 kwi-15: 32
Khawufane ucinge ukuba lincinci kangakanani inyathelo ukusuka kwiqhosha ukuya kwilebula yedijithali (umzekelo, i-RFID chip).
Ngaba unokuyithelekelela nantoni na ngaloo nto?
Konke kulungiselelwe ... xhuma amachaphaza
11 Novemba 2019 kwi-23: 56
Kukho inyathelo elinye eliphakathi elihamba nge “smart watch” kunye netekhnoloji ye4G / 5G: ngokuzithandela ekwabelaneni ngemeko yezempilo neenkampani.
Ewe kunjalo, ukudlulisela imeko yakho yezempilo kwi-inshurensi yakho yezempilo kujonge kakhulu ngasese, kodwa ngethamsanqa sinokuthi sikholelwe i-ASR kwamehlo abo aluhlaza ukuba baya kusebenzisa idatha kuphela yenkuthazo efanelekileyo. Baye bayibeka ngokukodwa i-BV eyahlukileyo ukulungiselela le njongo apho idatha iya kugcinwa khona (ngubani onokumcacisela ukuba kutheni enokunika nasiphi na isiqinisekiso?). Kukangaphi iFacebook kunye noGoogle zilandele ingxelo yazo yabucala?
Imibuzo engacacanga ngokupheleleyo yemibuzo "yenkqubo yabathengi" malunga neNkqubo yeVenkile ye-ASR:
12 Novemba 2019 kwi-00: 33
Esi sisiqalo nje, kuqala izinto eziphathwayo emva koko izinto ezifakwe ngaphakathi kunye namayeza anokulandela umkhondo..Bona uRegina Dugan (DARPA) kwaye angayazi
12 Novemba 2019 kwi-00: 41
Ukuthetha malunga nesinxibelelanisi ...
10 Novemba 2019 kwi-15: 36
Ngokufakela iilebheli ngakumbi (funda ngokungathanga ngqo, funda: istashism kwijethi emnandi)
Isicelo somthetho welungu leRaemaker ukuba uhlengahlengise umThetho woKhathalelo lwaBantwana ukukhuthaza abazali ukuba bakhethe phakathi kwamaziko ononophelo lwabantwana abakwenzayo okanye abangabavumeli abantwana abangathathi nxaxheba kwinkqubo yokugonywa kukazwelonke (35049).
Into elandelayo sisicelo somthetho kumalungu eRaemaker ukuba ahlengahlengise umThetho woKhathalelo lwaBantwana ukukhuthaza abazali ukuba bakhethe phakathi kwamaziko okhathalelo lwabantwana abakwenzayo okanye abangabavumeli abantwana abangathathi nxaxheba kwinkqubo yelizwe yokuthintela, iPhepha lePalamente 35049.
10 Novemba 2019 kwi-23: 12
Qaphela: "ungazikhetha" ibango likaGeorge Orwell lika "awukhutshelwa ngaphandle"
10 Novemba 2019 kwi-16: 09
Imfihlo enkulu yemfazwe yesibini yehlabathi
mhlawumbi uninzi lwamaNazi aphezulu kakhulu ayenayo imvelaphi yaseJamani / yaseJamani.
Ngapha koko, lonke uxinzelelo loontanga luthando nje. Inkcaso, ukutshintshiselana ngeengcinga akuvumelekanga. Makungabikho mahluko kwezimvo. Hee, ngaba sithetha ngeNetherlands apha?
10 Novemba 2019 kwi-17: 56
Ngaba intetho yeendaba yase-Orwelian? ngale nto
Ukulungisa indalo egcinayo kwihlabathi liphela (ikoloniyali?), Kucingelwa ukuba imele indalo, ha ha ha.
Yonke into ethe yachukulwa / yasekwa nguyisemkhulu, uyazi ukuba inosulelo kwaye kukhona abantu abasala bengamalungu. Ngokwenyani amaqhosha e-WWF kufuneka abenoshicilelo lweNkosana kwiiyunifom, emva koko uyazi ukuba yeyantoni na.
(kwaye kwangaxeshanye ukuzonwabisa kwakho njengomsunguli okhankanywe ngaphambili wayenakho kokuziqhelanisa, nokudubula imikhombe)
10 Novemba 2019 kwi-21: 20
Oko besishumayela kwaye sishumayela apha kule ndawo kangangeminyaka kuya kusanda kumphezulu nakwibala elibonakalayo legusha ebonakalayo enebhulawuza kuyo. Ngoku ukhetho kukubambisa okanye ukuqhutywa kwintsimi entsha ngenkululeko encinci yokuhamba.
Kwaye i-NAZIs ukuba azikabikho, olona phosiso lukhulu lukhoyo. Abo banamehlo ukuyibona kufuneka nje bajonge kwi-NATO yeNtloko kubandakanya uphawu .. Ungamlibali uMartin Bormann, amandla esithunzi sangempela seReich esinokusebenza singaphazanyiswa iminyaka eParaguay nakwindawo ezisingqongileyo. Owu ewe aymangalisi ukuba iBushes neMerkel zizezazo izindlu eParaguay kwaye zingabamelwane bonke ..
10 Novemba 2019 kwi-21: 25
UHitler wayeyeyona iZionist enkulu eyayikho ...
10 Novemba 2019 kwi-22: 57
Ividiyo iyabutyeshela ubuxoki obukhulu belo xesha kwaye iyasityeshela isibakala sokuba iJamani yamaNazi yancedwa yiZionism evela eNtshona (e-UK nase-US) nakwizigazi ezibalaseleyo emva kwayo. Ngamanye amagama: bayayicekisa iJamani yamaNazi njengeyeyakho eyenziweyo-yolutshaba ngokwayo (njengoko kutshanje i-ISIS eSyria yayizenzele ngokwayo).
11 Novemba 2019 kwi-00: 20
ewe kulungile, bendikhathazeke ngakumbi ngesivumelwano saseHaavara kunye ne-Judenrat (ibhunga lamaYuda). Ngokumalunga nokuxhaswa ngezimali, ndincoma umsebenzi ka-Antony C. Sutton "Wall Street kunye neRise of Hitler"
"I-Hitlerism isivumela ukuba sitshintshe zonke izinto zibe ziZionism.
11 Novemba 2019 kwi-00: 42
11 Novemba 2019 kwi-00: 46
Ngokwenyani iindaba ezindala zonke
Ngaphandle kolwazi lwexesha elidlulileyo, akukho mbono wangoku
11 Novemba 2019 kwi-08: 00
Incwadi enomdla ebhalwe nguGreg Hallet, owayesakuba yinhloli ye-MI6, uHitler wayengummeli waseBritane, wacetyiswa. Ngendlela, uHitler wayengekho mathandekayo ekusebenzeni njengeenhloli ngexesha nasemva kwe-1e yeha. Ngokuqinisekileyo inokuba wayenetalente yokudlala.
IBritane inentsingiselo eyahlukileyo kunesiNgesi!
Ewe, uHitler wayenokuzibulala. Sukuyikholelwa. I-DNA yakhe zange ifunyanwe kwisiseko "soku" isidumbu sakhe eBerlin. Wonke umsi kunye nezibuko ukulahlekisa uluntu ngokubanzi. UHitler, mhlawumbi ungumlandeli omkhulu, obeke iJamani kunye neJamani yangempela engxakini enkulu. IJamani iseyilizwe elihlaselweyo elilawulwa "ngamaJamani."
Le template yolawulo / yokucinezela inokufunyanwa kuyo yonke iYurophu apho abantu abaqhelekileyo begutyungelwe 'ngabelungu' abafikayo kwaye abakhululekanga ukuba bazikhulise kwaye bakwazi ukumisela ikamva labo.
10 Novemba 2019 kwi-21: 40
Yintoni ephosakeleyo kuloo ntloko ye-NATO? Into nge ISedes Sacrorum Schutzen Staffel?
10 Novemba 2019 kwi-21: 47
.. Kulungile ke xa sixakekile, ukugqiba yonke into ff 😉
IParaguay kwispanish malunga ne-Bush's 100,000 acre fihlaaway
11 Novemba 2019 kwi-00: 55
Kwaye ewe .. bafunda kwaye baphendula:
11 Novemba 2019 kwi-11: 32
Kwaye ndicinga ukuba inyathelo lesithathu kukuthatha uvavanyo lwedatha yeDNA. Njengoko kufanelekile ukuba ube lilungu lesizwe elifanelekileyo, nakuphi na ukuphambuka kumgca weqela kukhulu kakhulu. Iimpawu kunye nezinye izinto ezinxaxhileyo kufuneka zichongwe.
11 Novemba 2019 kwi-11: 49
Ukubonakaliswa ngoMatshi 13 2012 eBerlin uGqr. Rath abantu baseJamani naseYurophu bathathe uxanduva. Sisimemo sokudibana ngokudibeneyo ekwakheni idemokhrasi eYurophu ebantwini nasebantwini-kunye nesayensi yezempilo entsha esekwe kuphiliso nasekuthinteleni izifo. Iziphumo zophando lwezenzululwazi ezikhoyo ngoku kumayeza endalo zenza kucace ukuba la mayeza anokunciphisa izifo ezininzi zikawonkewonke ngesabelo esivakalayo. Nangona kunjalo, asinikwanga lo 'Mhlaba ungenasifo' - kuba zonke ezi zifo ziyintengiso yezigidi zeedola kuMashishini kaP Pharma. Ukuba sifuna eli lizwe ngaphandle kwezifo kuthi nabantwana bethu, ke kufuneka simanyane. Ngoku!
11 Novemba 2019 kwi-11: 58
Kunyaka ophelileyo okokuqala.
Mnumzana / mhlekazi othandekayo,
Ngale leta ndikumemela ukudutyulwa komkhuhlane waminyaka le.
Ufumana umkhuhlane sokudubula simahla, ungafika ufumane ukudubula komkhuhlane ngalo mhla nangexesha.
Ndivuthe ngumsindo kwaye ugqirha wam wathumela incwadi nguDavid Icke ngesicelo sokuba ndizicime kwifayile.
Iiveki ze-3 ezidlulileyo.
Ngale leta ndikumemela ukudutyulwa komkhuhlane waminyaka le
Ngoku ndiza kumbiza.
« Ungabanyanzela njani oorhulumente ukuba batshintshe ngelixa ungabanaki abantu?
Ingqina lesithsaba kunye nomdlalo ophakathi kolwaphulo-mthetho lukarhulumente kunye nommeli (Igqwetha lokulingana ngokuchasene nePlasman) »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.497.632